Vhidhiyo: Media Matters | Martech Zone
Vhidhiyo: Media Matters
Svondo, Kukadzi 24, 2013 Douglas Karr
Nezuro manheru ndakapinda Franklin Firimu Mutambo, mutambo wepagore unopemberera mavhidhiyo akanyorwa, akafotwa uye anogadzirwa nevadzidzi veFranklin Indiana High School. Mavhidhiyo mapfupi ese aikurudzira uye akahwina akadaidzwa Nhau dzeMedia rakanyorwa naAustin Schmidt naSam Meyer.
Iyo firimu inotarisa pane kutenderera kwenhau uye ichifananidza terevhizheni yemuno, pepanhau neredhiyo uye nemabatiro avanofanira kuzviita kune izvozvi kudiwa kwezviri mukati kuburikidza newebhu uye vezvenhau Nepo paine chishuwo chekuda zvemukati uye vateereri vakagovaniswa pamasvikiro, iyi nyaya iri, zvine mutsindo, muenzaniso wakanaka wezvakakosha uye kiyi kune yakanaka utapi venhau. Blogs uye vezvenhau midhiya akakosha ekubatanidza uye kutsikisa nokukurumidza, asi zvirimo hazviwanzo kuongororwa zvizere uye zvakanyorwa senge nyaya yakanyorwa nemutori wenhau akanaka.
Ruzivo rukuru rwunogara ruchizopedzwa-zvakanaka. Vatori venhau havafanirwe kunge vachikwikwidza ne24 / 7 yenhau kutenderera, ivo vanofanirwa kunge vachipa kudzika kunodiwa kwatiri kuti tinzwisise zvakakwana nhaurwa yakapihwa. Ini ndinofunga ndizvo zvakarasika muhondo yemaziso eziso uye ndizvo chaizvo chikonzero kuverengera uye kuona kuri kudzungaira kubva kuchinyakare midhiya. Haisi kuti nhau dziri nani online, ndezvekuti nhau hadzisi kutaurwa zvakanaka. Ndinovimba kuti Austin naSam vakadzidza izvi sezvavanonyora uye nekuvandudza yavo huru nyaya.
Uye ini ndinovimba ndizvo izvo vashambadzi vari kudzidza nezvazvo kufudza chikara naizvo. Kunyora zvemukati nekuda kwekunyora zvemukati kunokanganisa kutarisisa kwevateereri vako uye hakuvape iwo ruzivo rwakakwana rwavari kutsvaga. Nyora mushe, ugovana kazhinji, uye ita zvemukati zvinoshamisa.
Tags: austin schmidtdon wettrickfranklin firimu mutambonhausam meyer
Zvemagariro Midhiya Zvinotsanangurwa neKofi
Formstack: Wedzera Fomu kuDropbox